Apartment1 kufuphi nolwandle, Island Krk
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMatea
I-93% yeendwendwe zakutshanje inike uMatea iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Amagumbi ethu abekwe kumbindi wesiqithi (yimizuzu emi-5 ngemoto esuka ePunat kunye nesixeko esikhulu saseKrk), kwindawo enoxolo kunye neminquma kunye namakhiwane yonke indawo.
Indlu ibekwe kumgangatho ophantsi wendlu yethu (ekufuphi ne-2) kwindawo encinci ebizwa ngokuba yiKornić. Ikwisitrato sokuqala kufutshane nolwandle, kufutshane nevenkile yokubhaka, indawo yokutyela…
Ixhotyiswe ngeTV yesathelayithi kunye neWi-Fi engenazingcingo. Ibandakanya ikhitshi, igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela kunye nethala elijonge emazantsi.
Egadini uya kufumana ibarbeque kunye netafile yokutyela enezitulo apho unokonwabela kunye nosapho lwakho kunye nabahlobo ulungiselela izinto ezahlukeneyo zebarbeque. Ungayimisa imoto yakho phambi kwendlu.
Kwimeko apho ufuna uncedo malunga nesikhululo seenqwelomoya / isikhululo sebhasi, nceda undixelele, siya kulungiselela into ethile.
4.48 · Izimvo eziyi-60
I-Kornić yidolophana encinci ehlala i-3 km ukusuka kwidolophu yaseKrk kunye ne-2 km ukusuka ePunat. Elalini uya kufumana indawo yokubhaka, ivenkile enkulu, indawo yokutyela, ibha yekofu kunye neposi-yonke into oyifunayo.
I-Beach Dunat, eyi-400 m kuphela ukusuka kwindlu yethu idume kakhulu nge-Wakeboarding.
Umbuki zindwendwe ngu- Matea
Sihlala kwindlu enye kwaye sithanda ukunxibelelana nezinye iindwendwe, ukubanceda kunye nokwabelana ngeengcebiso.
Silindele ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho nathi ngokupheleleyo, uqinisekisa ukuba uya kubonelelwa ngazo zonke izinto zale mihla kunye noncedo oluyimfuneko. Siyathemba ukuba uya kuba nexesha elikhumbulekayo ngelixa uhlala apha nathi.
Ukuba ufuna olunye ulwazi, nceda undazise, ndiya kuvuya ukukunceda ngeyona ndlela ingcono.
Silindele ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho nathi ngokuphelele…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Krk